Cape Town Mazino Kuchena | Tora mhedzisiro yaunoda, yakavimbiswa
Zoom Meno Kuchenesa mu-chigaro uye kutora-kumba kits eKapa
Sangana naEmma King
OptiSmile ine mukana wekuva nemukurumbira uye mudzidzisi wekushambadzira wePhilips ZOOM South Africa… Emma King. Emma ari kuOptiSmile mazuva matatu pasvondo. Emma anodzidzisa vese vanachiremba vemazino uye vezvehutsanana muSouth Africa neSub-Saharan Africa nezve hutsanana hwemukanwa uye mazino ekuchenesa makiti pamwe nemiti yekuchenesa yemumuromo. Kana iwe uchitsvaga "mazino kuchenesa pedyo neni"Kana"mutengo yemeno kuchenesa "kana kungoda kutsvaga"mutengo yemeno machenesa ”muCape Town kana kazhinji muSouth Africa. Usati wachenesa mazino ako isu tinofanirwa kuona kuti ane hutano here, saka paOptiSmile tichagara tichikurudzira kuti uve nemubvunzo wakazara uye kana zvichidikanwa x-rays nemumwe wevanachiremba vedu vemazino kutanga. Nzira yakanakisa yekutanga ndeye kudzvanya pane iyi link kune yemahara vhidhiyo kumisikidza uye kuitora kubva ipapo. Emma haakwanise kuona varwere vane avo vezvechiremba wemazino sezvo iri yehunyanzvi kukakavara kwekufarira. Chiremba wako wemazino anofanira kukwanisa kuchenesa meno ako, kana kuti uchafanirwa kusiya chiremba wako wemazino uye uve murwere weOptiSmile usati waona Emma.
PHILIPS ZOOM Nyanzvi Mu-Sachigaro uye Yekutora-Kumba Meno Kuchenesa
5 Zvikonzero Zvikuru Zvokuchenesa Mazino Ako
Zvichida iwe wagara uchida kunyemwerera chena, mazino ako akaita yero, kana kusvibiswa Pane zvikonzero zvakawanda zvekuchenesa meno ako anosanganisira:
Kuwedzera kuvimba kwako uye kuzviremekedza
Chiitiko chakakosha senge muchato, kubvunzurudzwa kwebasa kana kusangana zvakare
Kugadzira yakanaka yekutanga pfungwa
Kutora makore kubva kunyemwerera kwako
Meno Kuchenesa Kunoshanda Sei?
Meno machena machena zvigadzirwa anobatsira kubvisa ekumusoro mavara uye mabara asi haachinje iwo chaiwo iwo mazino emazino. Izvi zvinogona kuve chero chinhu kubva pamushonga wemazino kuenda kune wehunyanzvi kuchenesa neyako yemuromo yekuchenesa.
Kuchenesa inzira yemakemikari inoshandura ruvara rwemukati rwemazino, ichirerutsa uye inovandudza zvinoshamisa maitiro avo. Iko hakuna chakadai chinhu sekuti saizi imwechete inoenderana neese maitiro evhu, uye munhu wega wega anofanirwa kuve neakagadziriswa maitiro evhenekeri anoenderana navo nemazino avo. Paunenge uchinge wachenesa yako "pearly chena", ivo vanozoda gadziriso, uye zvakakosha kuti uite imba yekugadzirisa uchishandisa yakajairwa bhenji tireyi uye yakanaka yemukanwa hutsanana.
Nekudaro, kuita izvi kuti zviitwe neanokwanisa mukanwa wehutsanana kana chiremba wemazino achishandisa mhando yepamusoro mazino ekuchenesa zvigadzirwa zvinoreva mhedzisiro inogara kwenguva refu pasina kukuvara uye kushoma kune kusagadzikana.
Kuchenesa inzira yemakemikari inoshandura ruvara rwemukati rwemazino, ichirerutsa uye inovandudza zvakanyanya kutaridzika kwainoita. Iko hakuna chakadai chinhu sekuti saizi imwe inokodzera maitiro ese ekuchenesa uye munhu mumwe nemumwe anofanira kunge aine chirongwa chakasarudzika chekusvitsa chinoenderana navo nemazino avo. Kuti uchengetedze machena machena machena kwemakore anouya, zvakakosha kuti uite imba yekugadzirisa uchishandisa yakagadziriswa kuchenesa matareyi hutsanana hwemuromo.
Nekudaro, kuwana izvi nemazvo kuitwa nachiremba anokwanisa wehutano kana chiremba wemazino uchishandisa mhando yepamusoro mazino machena zvigadzirwa zvinoreva mibairo inogara kwenguva refu pasina kukuvara uye kushoma kune kusagadzikana.
Chii Chinokonzera Mazino Kubviswa?
Zvikonzero zvakajairika kuti mazino ako ave yero kana akasviba ndeaya:
Kushandiswa kwemvura yakasviba-yakaita sekofi, tii, uye waini tsvuku
Husina hutano hwemeno
Kukwegura kunoitawo kuti mazino asapenye zvishoma nekuti enamel rako rezino rinoita kuonda uye iyo dentine inosviba. Izvo zvakare zvinokwanisika kuve nematavi mukati mezino anonzi emukati matangi, ayo anogona kukonzerwa kubva mukukuvara kwepanyama kumeno ako kana kuratidzwa nemishonga inorwisa mabhakitiriya panguva yehudiki.
Mhando dzeZino Kuchenesa Sarudzo
Pamusoro peCounter (kuchena kwemazino uye zvidimbu)
Izvi zvigadzirwa zvinobatsira kubvisa madonhwe epasi chete uye mazhinji haanyatso shandura ruvara rwemeno ako. Zvakawanda pamusoro pezvigadzirwa zvekaunda zvine acidic uye zvinogona kukonzera kukuvadza kwakanyanya kumeno ako uye zvivakwa zvekutsigira, pamwe nekuzadza kwako / kudzoreredza. Unyanzvi hwako hwemazino hunogara huri hwakanakisa munhu wekubvunza kana zvasvika kune icho chigadzirwa chaunofanirwa kunge uchishandisa. Unyanzvi huchenesa zvigadzirwa zvinotengeswa navanachiremba vemazino uye vanochenesa mukanwa, senge mishonga yekugezesa uye yekushambidza mukanwa zvakachengeteka zvakanyanya kumeno ako kupfuura pamusoro pedzimwe nzira dzemaunda. Chero zvigadzirwa zvekuchenesa zvisina kugadzirwa kuti zvikwanise muromo wemunhu zvinogona kukonzera kukuvara kwakanyanya kumatadza pamwe nemazino, kunyangwe kana asina hydrogen kana carbamide peroxide.
Tora-Kumba Kurapwa (Nyanzvi yekutora-imba kuchenesa uchishandisa yakagadziriswa matray)
Iyi sarudzo inoda kusangana nachiremba wemazino kana mazino wehutsanana kuti ugadzirise chirongwa chechenesa kuti chikwanise iwe nemazino ako. Kuchenesa kuchaitwa, kuchiteverwa nekuratidzwa kwetereyi yekumba-kuchenesa matayi. Izvi zvinowanzotora inenge awa kugadzirira uye kugadzira. Iwe uchazopihwa hushoma hwekutora kumba kwePhilips Day kana maNite White ampoules pamwe neRelief gel yekushandisa mukati memasvondo maviri anotevera. Icho chikonzero chekushatisa pameno ako chinotarisa kusimba kweperokisi gel kuti ishandiswe uye urefu hwenguva yauchazoda kubhenekesa. Mumwe munhu anogona kuzadzisa zvaanoda mukati memavhiki maviri achishandisa Zuva Chena kwemaminitsi makumi matatu pazuva, uye mumwe angangoda kuenderera kwemwedzi mitatu kuti awane zvavanoshuvira. Zvakachengeteka zvakakwana kuramba uchichenesa kwenguva yakareba chero bedzi meno achiri kuchinjisa ruvara. Wedu wemuromo wehutsanana anokuona iwe nguva zhinji pamusoro penguva ino kuona kushandiswa kwakakodzera kwechigadzirwa uye kukubatsira iwe nehurongwa hwako hwekuchenesa nekutora pamberi uye shure kwemifananidzo nemumvuri uye kuongorora kufambira mberi kwako. Iwe unozofanirwa kudzivirira chero chikafu uye zvinwiwa izvo zvinogona kusvibisa chena yepamusoro kweinosvika awa imwe mushure mega yega yekutora-kumba kuchenesa nguva.
In-Sachigaro (kurapwa kuna chiremba wemazino)
Isu tinongoshandisa Philips Zoom kune yedu-chigaro uye tora-kumba kuchenesa (kuchenesa) sarudzo. Sarudzo ye-chigaro inosanganisira kushanya kuviri uye kazhinji inotora ingangoita awa kweiyo chaiyo yekuchenesa maitiro, kusanganisa kwehunyanzvi kuchenesa uye kutaridza, pamwe neyakagadzwa yekutevera svondo rinotevera. Kusarudzwa kwakazara kunogona kutora kusvika kumaawa maviri zvinoenderana nekuchenesa kwakawanda kunofanirwa kuitwa pachigaro. Kusarudzwa kwechipiri kungori kwekuremekedza kutarisa pamumvuri uye kuona kuti tese tiri vaviri tinofara neruvara. Vese varwere vachapihwa hunyanzvi hwakagadziriswa uye vagadziriswe matayi ekuchenesa uye vachazoda kuita imwe imba kuchenesa mushure mekuita kwavo kwechigaro.
Mirayiridzo yekuchenesa pamba zvakare inosiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune anotevera zvichienderana nerudzi rwematsotsi atiri kubata nawo. Iyo inononoka zvishoma zvishoma kumba kuchenesa iyo munhu yaanogona kuita mukubatana ne-mu-chigaro kuchenesa iyo yakareba iyo ruvara inobata uye inogadzikana mhedzisiro. Izvi zvinorevawo kushomeka kwekuchengetedza mukati menguva refu. Funga nezvekufanira kurasikirwa nemakumi matatu emakirogiramu uye uchingotarisira kuzvivhara mumushini uye funga kuti matambudziko ako agadziriswa. Iyo inononoka uye zvishoma nezvishoma maitiro acho akareba mhedzisiro.
Vazhinji vanhu vasina kuchenesa (vakachenesa) mazino avo vangazoda kusarudza iyo yakazara-cheya uye kutora-kumba kuchenesa combo. Izvi zvine 3 x 15 maminetsi e-pachigaro machena uchishandisa mwenje weLED uye 25% Hydrogen peroxide bhenji gel. Unogona kusangana nekunzwa kushoma asi izvi ndezvenguva pfupi uye hapana kukuvara kumeno kana zvimiro zvekutsigira. Zvese zvigadzirwa zvePhilips Zoom, kusanganisira izvo zvekutora zvekuenda kumba, zviri zviviri-zvakapetwa uye zvine pH yegumi nesere, saka ivo vane alkaline zvishoma uye vanoyeuchidza mazino pavanenge vachichenesa. Izvo zvigadzirwa zvinogadzikana zvakanyanya uye hazvifanirwe kuve mufiriji senge ese maaroure-barreled ampoules pamusika.
Isu tinopawo sarudzo dzekuchenesa kwatinoita 2 x 15 maminetsi ekuchenesa pachigaro uye iwe unoita zvishoma kuchenesa kumba pane kungova vhiki mushure mekuzara pachigaro sarudzo. Kune izvo zvisina kunaka nekuchengetedza, tinokwanisa zvakare kukupa iwe maminetsi gumi neshanu pachigaro unobata kumusoro kwechipiri paunouya kuzochenesa zvehunyanzvi, kungo chengeta iwo maparera anotarisisa.
Zoom mazino machena anokuvadza here?
Yese nyaya yekuchenesa inofanirwa kuve yakagadzirirwa kuti ienderane zvese iye munhu nemeno avo. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge waita. Kunzwisisa kunogona kudzorwa nachiremba mukuvharidzira kwavanoita uye nekuchena kwavanoita muzuva rimwe chete. Mhando yekutora-kuchenesa kumba zvakare yakakosha kubatsira kubatsira kudzikisira chero kunzwisisika. Nguva yekupfeka chinhu chakakura mukunzwa - dzikisa izvi nekuwedzera muzana yejel yekuendesa kumba, uye iwe unogona kupfeka matayi ekuenda nawo kumba, semuenzaniso maminetsi makumi matatu nenguva. Kune zvakare desensitizing gels anowanikwa uye anogona kushandiswa pamberi uye mushure mekuchenesa. Kana ukaita kuona chero nehanya, zviri pfupi, kazhinji maawa mashomanana uye anoenda kure zvachose. Iyo chaiyo jena jena inopinda munzira yese kusvika pakati pezino pane tsinga, saka hazvireve kuti pane chakashata. Vanhu vazhinji vanoona kushoma kwekusanzwisisa.
Ko mazino ekuchenesa micheka uye zvinyoreso zvinoshanda here?
Kuchenesa kwehunyanzvi kunoshandura ruvara rwemazino ako apo machena machena uye mitsetse inowanzo nyungudusa matangi epamusoro uye pamwe inogona kuchinja iwo ruvara nehukuru 1 kana 2 mumvuri. Ivo vari chaizvo "kuchenesa" zvigadzirwa pane hunyanzvi kuchenesa. Iwo akanaka ekugadzirisa kana chako chaunoda chawanikwa. Ive nekuchengetera mitsetse ine yakakwira hydrogen peroxide zvemukati sezvo iwo akatwasuka uye asina kugadzirirwa kuti akwane mazino / muromo wako uye zvinogona kukonzeresa kukuvadza kune matadza.
Unopa kubvunzurudza KWEMAHARA?
OptiSmile inopa yemahara vhidhiyo kubvunzana nachiremba wemazino kutanga uyezve paunouya kuzobvunzwa uye chero anodiwa xrays, iwe uchaongororwa pasina muripo wemeno machenesa.
Kuchenesa kunoita kuti mazino ako anetse?
Kuchenesa kwakasiyana nekuchenesa nekuti uri kuchinja iro remukati ruvara rwemazino uye kwete kungobvisa mavara epamusoro. Kuti uite izvi, unofanirwa kushandisa hydrogen kana carbamide peroxide inopinda muzino uye inogadzirisa mamorekuru akashatisa akadzika mukati mezino, kumusoro chaiko kurwisa tsinga. Iyo tsinga inogona kusimudzirwa, uye iwe unogona kusangana nekunzwa kwemaawa mashoma, asi izvi zvinogona kudzorwa nachiremba wako wemazino zvakanyanya. Kupatsanura mu-chigaro maitiro kumusoro kwemazuva mashoma kunobatsira. Kuvhara nzvimbo dziri pamazino dzakasakara nekubvarura kunoderedza mukana wekuva nehanya, uye kupa varwere matireyi akagadzirwa ekushandisa pamba uye rakakodzera simba gel rakapfekwa panguva yakakodzera. Iwe unogona zvakare kugamuchira desensitizing gels ekushandisa pamba, asi kazhinji izvi zvese zvinogona kudzivirirwa uye kugadzirirwa kune mumwe nemumwe murwere. Kuchenesa haisi imwechete saizi inoenderana nemaitiro ese, uye munhu wega wega anofanirwa kuve nawo
OptiSmile inopa ZOOM mazino kuchena muCape Town?
Ehe! OptiSmile ndomumwe wevatangi vekutanga vanochenesa meno muCape Town. Tine basa rakasarudzika naiye wezvehutsanana Emma King anova maneja wekudzidzisa wePHILIPS ZOOM yeSouthern Africa! Emma anopa yemahara 1 kushanya pamwe kuzere kubvunzana kuti uone kuti ndeupi mushonga wakanaka uchave wako chaiwo mamiriro. Fonera 087 702 6886 kuti ugadzwe. Kana WhatsApp OptiSmile pa0711400396
Kuchenesa meno kunokonzera kukuvara here?
Kuchenesa kwehunyanzvi kunowanzo sanganisira zvigadzirwa zvinogamuchirwa nemasangano eInternational Dental kuti ave nechokwadi chekuti hapana kukuvara kune zino. Kana munhu akazadzikisa yavo yekuchenesa mhedzisiro uye akaramba achichenesa, ndipo paunogona kukonzera kukuvara. Izvo zvakakosha kuti uteedzere mirairo kubva kuna wako mazino nyanzvi maererano nekuzadzikisa uye kuchengetedza yako kuchenesa / kuchenesa mhedzisiro. MuSouth Africa, hazvisi pamutemo kuti chero munhu asiri chiremba wemazino kana wehutsanana ashandise zvigadzirwa izvi.
Chii chinonyanya kushanda? In-chair kuchena kana kutora-kuchenesa kumba?
Zvichienderana nemeno ako, zvese zvekutora kumba uye nemachigaro sarudzo zvinogona kuwana kuchena kwakanyanya. Zvese kuchenesa kwekutora kumba uye kweye-cheya kuchenesa zvinoda kugadziridzwa kuti zvienderane nemunhu wese uye pachigaro zvinoda kusanganiswa nekuchenesa kwekutora kumba kuona kuti ruvara rwakabata uye kuti ugone kuchengetedza ruvara pamba pamwedzi wega wega. Kuchenesa kumba kunogona kutora avhareji yemavhiki e4-6, uye zvakanyanya muchigaro uchichenesa iwe zvaunoita, shoma basa rechikoro raunofanira kuita. Kana imwe mhedzisiro yawanikwa zvirinyore kuchengetedza iwo ruvara kutaridzika zvakanaka mune mashoma se30 maminetsi kamwe pamwedzi kumba
Mimwe mibvunzo inowanzo bvunzwa
Zoom mazino kuchenesa yakachengeteka here?
Inotora nguva yakareba sei Zoom mazino kuchenesa?
Chii chinonzi Zoom mazino machena maitiro?
ZOOM inochenesa mangani?
Iwe kangani iwe unofanirwa kuita zoom mazino kuchenesa?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti uone mhedzisiro kubva pakuchenesa kwemeno?
Chii chekudzivirira mushure memeno machena?
Meno ejena anogona kuchena here?
Sei mazino angu ari yeyero, kunyangwe ndichiasukurudza?
Sei mazino angu ari yeyero ini ndichiasukuta mazuva ese?
Ko Crest White Strips inoshanda pamazino ejena?
ZOOM inodhura zvakadii muSouth Africa?
Mazino Akachenesa paOptiSmile
Yemazino akanakisa ekuzora anojekesa Cape Town mutengo, shanyira OptiSmile. Isu tinopa akasiyana mazino ekuchenesa akakosha. Iyo meno ekuchenesa kit yaunosarudza ichaona mutengo wemeno ako ekuchenesa maitiro.
Isu tinongopa iyo Philips Zoom zvigadzirwa uye kits .. Zoom ndiyo inotungamira yepasi rose kuchenesa kambani. Hapana laser inoshandiswa, inoshandisa mwenje wakasarudzika. Sarudzo dzinosanganisira:
Zuva Chena 9.5% Hydrogen Peroxide (30 maminetsi epamusha- yakanaka yekuzadzisa mhedzisiro yekutanga uye yekuchengetedza kits)
Zuva Chena 14% Hydrogen Peroxide (gumi neshanu maseketi kumba kits- yakanakira kugadzirisa mushure mekutanga mhedzisiro yawanikwa)
Nite White 10% carbamide Peroxide (6-8hours husiku kititi chekuchenesa pamba- yakanakira kuzadzisa mhedzisiro yekutanga uye kugadzirisa. Philips ZOOM zvigadzirwa Nite White 10% carbamide Peroxide chigadzirwa chakanakira kwenguva refu inononoka, zvishoma nezvishoma kuchenesa pamatsipa akaomarara senge asingakoshe (akafa) mazino.
Philips Zoom Yakacheneswa ichishandisa mwenje weLED (isina laser) uye 25% Hydrogen Peroxide gel - yakazara pachigaro musi iwoyo kuchenesa, kusanganisa kuchenesa uye mu-chigaro kubata-kumusoro. Chikamu chega chega chezuva muchigaro chinotora maminetsi gumi nemashanu, kusasiya nguva yekuvharira. Yakazara mu-cheya kuchenesa ndeye 15 × 3 maminetsi mune imwechete kugara pamwe nekuvhara nguva)
Ehe. Kunyatso kutsvagisa uye zvidzidzo zvekiriniki zvinoratidza kuti kuchenesa pasi pekutarisirwa kwechiremba wemazino kuri 100% yakachengeteka. Vanachiremba vazhinji vemazino vanofunga kuchenesa nzira yekuchengetedza mazino yakachengeteka iripo. Muna 2009 muSouth Africa zvakave zvisiri pamutemo kune chero munhu asiri chiremba wemazino kana chiremba wemazino kuchenesa (bvisa) mazino ako, zvisinei kuti chigadzirwa chacho chine peroxide here kana kuti kwete.
Chii Chaicho Chinonzi Meno Kuchenesa?
Nehunyanzvi, iyi maitiro ekuti mabara epasi anobviswa pameno ako, uye zino rinotaridzika rakachena asi harisi kuchena zvachose. Kuchenesa inzira yemakemikari iyo inovhenekera discolouration yeiyo enamel uye dentine. Chaizvoizvo, iyo inoshatisa mamorekuru mukati memeno ako yakadonhedzwa, asi iro chairo simba rezino harina kukanganiswa munzira ipi neipi, chero bedzi izvo zvinoshandiswa zvinoshandiswa zvichibvumidzwa uye zvakanyoreswa nezviremera zvakakodzera. MuSouth Africa, tinofanirwa kunyoresa zvigadzirwa neMedicine Control Council. Zvigadzirwa zvinoshandiswa muma spa uye runako salons hazvina kunyoreswa uye zviri kushandiswa nevanhu vasingatenderwe zviri pamutemo kuti vashande mumuromo mako uye vasina kudzidziswa zvine hunyanzvi.
Zvinotora Nguva Yakareba Sei?
Izvi zvinoenderana nechirongwa chakagadzirirwa iwe. Zvinogona kutora chero chinhu kubva kune imwechete-yezuva kusarudzwa kunoteverwa nevhiki rekuchenesa kumba kusvika kumwedzi mitatu yekuchenesa kwepamba. Iwe unogona kutibata nesu usati wabhuka nguva yekuona kana tiine chero mazino ekuchenesa akakosha aripo. Kit imwe neimwe inoshanda zvakasiyana; Naizvozvo, iwe unofanirwa kubvunza chiremba wemazino anokwanisa usati wafunga nezvemaitiro ekuita.
Ndeupi Mhando Yemhedzisiro Yandinogona Kutarisira?
Zvakajairika kuwana mhedzisiro 6-8 mimvuri yakareruka. Zvinoenderana nemhando yerudzii rwechivara chauinacho; chiremba wako wemazino achakurukura zvakawanda newe panguva yekutarisa kwako. Wese munhu anosvika pane zvakasiyana mhedzisiro, uye chete 2-3% yevanhu vanozowana "Hollywood" kuchena kubva pakubhenesa chete. Mazino haana kuitirwa kupenya murima, saka iwe unenge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge wachenesa, asi zvichena mhedzisiro zvinoda kuwedzera kuchenesa. Iwe unogara uchida kubhenekesa kutanga wozoenderana nebasa idzva remazino kune chaunoda pane kuyedza kuenzanisa rako remazino nekuchenesa basa remazino zvisina kujairika. Wese munhu ane pakachenesa pakaperera apo mazino anomira kuchinja ruvara. Apa ndipo paunofanirwa kumisa kuchenesa uye kuenda kune yekuchengetedza kuti udzivise kukuvara kwezino iro pacharo, icho chinongova chimwe chikonzero chekuona kuti iwe uine nyanzvi yemazino kiriniki ichikufambisa nenzira iyi kubva pakutanga kusvika pakupedzisira.
Ini Ndinoda Kuchenesa Mazino Kuti Ndiwane Mazino Achichenesa?
Kuti uwane mhedzisiro, meno ako anofanirwa kunge asina chero chinyoreso. Utano hwemumuromo hunogara huchiuya pekutanga. Iwe haugone kuchenesa kana iwe uine chingamu chirwere kana nzvimbo hombe dzekuora, semuenzaniso. Mazhinji madiki ekuzadza anogona kuvharirwa kunze uye osanganisirwa mushure mekuchenesa, asi nzvimbo dzakawandisa dzekuora dzinogona kupedzisira dzichikonzera kurwadziwa kwakanyanya uye nenyaya nehutano kana ikasatariswa. Kana nguva ichibvumidza, tinokurudzira kuchenesa vhiki kana maviri kusati kwachenesa kuitira kuti matadza agadzikane, asi mune dzimwe nguva, izvi zvinogona kuitwa pazuva rimwe chete sekuchenesa. Zvese zvatinogona kuita zvinosanganisira kuchenesa.
Mhedzisiro Yakareba Sei?
Zvese muhupenyu zvinoda kuchengetedzwa. Iyo yakareba uye inononoka kuchenesa kwako kwekutanga, zvishoma zvaunoda kuti uchengetedze. Nokutevera rairo dzatinokupa, meno ako anogara achireruka kupfuura zvavaive pakutanga. Vamwe vanhu vanoda kuita maminitsi makumi matatu pamwedzi vari kumba. Kune izvi, ivo vanoshandisa yavo yakagadzika matareyi uye kutora-kumba gel, uye vamwe vanogona kuita 30-2 mazuva ese mashoma mwedzi kuchengetedza izvi zvinoenderana nehuwandu hwekofi, tii, waini tsvuku, nezvimwe izvo zuva nezuva pamwe neyakaenzana utsanana hwemumuromo. Iyo inochenesa mazino ako ari, iwo mukana mushoma wekushatisa uchisungirirwa kune iro zino pamusoro uye kukweverwa mukati nekushatisa meno zvakare.
Maitiro Ekuchengetedza Kwako Kunoshamisa Mhedzisiro
Paunenge uchinge waita kuti mazino ako acheneswe nehunyanzvi nesu, pane zvinhu zvaunogona kuita kudzivirira madonhwe uye chengeta kunyemwerera kwako kupenye sezvinobvira:
Dzidzira hutsanana hwemazino, kusanganisira kukwesha kaviri pazuva, kubhururuka kamwe chete pazuva uye kutiona isu kuitira kwako kuchenesa
Ziva nezvezvikuru zvakashatisa, senge waini tsvuku, madomasi-based chikafu, zvinwiwa zvine simba, tii nekofi
Sukurudza muromo wako nemvura mushure mekudya kana kunwa kuitira kuti chikafu chisvibise chigare pameno ako
Kubatana pamwe neOptiSmile ndiyo nzira yakanakisa yekutora mhedzisiro yemazino mhedzisiro yaunoda. Isu tinoziva hutano hwako hwemukanwa uye tinogona kuita kurudziro inokutendera iwe kuti uwane mibairo yakanaka kwazvo munguva yakatarwa inokushandira. Tichakubatsirawo kuti unzwisise mashandiro anoita kuchena, kuongorora kufambira mberi kwako uye kubata zvinhu zvekunzwisisa izvo zvingangowanzo simuka.
Vanopfuura makumi mana vedu mashanu Eongororo dzeNyeredzi vanotaura nezvaEmma uye chiitiko chikuru. Dzvanya pakuongorora kuti uverenge ese! Google Mazino Achichenesa padyo neni uye ona kuti ndiani ane ongororo zhinji pamwe nezvinotaurwa nevanhu. Chenjera kuongororwa kwekunyepedzera paunochenesa mazino pedyo neni